San Htun's Diary: All About DC - 3
National Gallery of Art ပြတိုက်ပိတ်ချိန် ညနေ ၅ နာရီ ။ နေက ခြစ်ခြစ်တောက် ပူနေတုန်း။ ည ၈ နာရီလောက်မှ နေဝင်တာမို့Tidal Basin တိုင်ဒန်ဘေဆင်ရေကန်၊ Thomas Jefferson Memorial ဖက်ကုို ခြေဆန့် ပါတယ်။ US Capitol ကယ်ပီတယ်ကနေ Monument မိုးနူးမတ် ကျောက်တိုင်အထိ ဘေးတချက်တချက်စီမှာ ပြတိုက်တော်တော်များများ ရှိတာမို့ကယ်ပီတယ်နဲ့မိုးနူးမတ်နား ပတ်နိုင်ရင် ဒီစီနှံ့ ပြီ။ နေရာတွေကလည်း တခုနဲ့ တခု ဆက်နေတာမို့အဲ လမ်းတော့ အသေလျှောက်ရတယ်း) ။
မတ်လကုန် ဧပြီလဆန်း နွေဦးတုန်းက ချယ်ရီပွဲတော် ကျင်းပတယ့် တိုင်ဒန်ဘေဆင်ရေကန်နဲ့ဂျက်ဖာဆန် မန်မိုရီယန်။
Franklin Delano Roosevelt Memorial မှာတော့ သူရဲ့ထင်ရှားတယ့် အဆိုအမိန့် တွေကို ကျောက်တုံးတွေမှာ ထွင်းထုထားတယ်။ လူတွေဖန်တီးထားတယ့် ရေတံခွန်ဆိုပေမယ့် ရေတွေ တသွင်သွင် စီးနေတာကို မြင်ရတာ အေးချမ်းတယ်။
လှေကားထစ်မှာလည်း မိန့် ခွန်းတွေ
လူမည်းတွေ လူဖြူနဲ့ တန်းတူ မဲပေးခွင့်ရရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ် Martin Luther King Jr. Memorial ။ ရုပ်တုမှာ ရေးထိုးထားတယ့် မိန့် ခွန်းတွေထဲက အငြင်းပွားဖွယ်ရှိတယ့် စကားလုံးတွေကို တရုတ်ကျောက်ဆစ်ပညာရှင်နဲ့ဖယ်ရှားနေပါတယ်။
သမ္မတကတော်က ဒီကျောက်မီးပုံးက ဆီမီးတိုင်ကို မီးထွန်းညှိ၊ ချယ်ရီပင်အသစ် စိုက်ပျိုးပြီး ချယ်ရီပွဲတော်ကို ဖွင့်လှစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အနီးအနားမှာ ပထမဆုံး စိုက်ပျိုးခဲ့တယ့် ချယ်ရီပင်နှစ်ပင် ရှိပါတယ်။ တိုင်ဒန်ဘေဆင်ရေကန်တလျှောက် ချယ်ရီတွေ အစွမ်းကုန်ပွင့်ပြီဆိုရင် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် လှပလွန်းလို့ချယ်ရီပွဲတော်ကို နွှဲပျော်ဖို့နွေဦးရာသီ ချယ်ရီပွဲတော်ချိန်ဆို ဒီစီကို လူတွေသန်းချီ လာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်။ ဒီနှစ် ချယ်ရီအစွမ်းကုန်ပွင့်ချိန်တုန်းက ကျောင်းကိုရောက်နေလို့ချယ်ရီတွေနဲ့ဓာတ်ပုံမရိုက်လိုက်ရဘူး။ ချယ်ရီပွဲတော် ဘယ်လောက်လှကြောင်း ဂူဂယ်က ဓာတ်ပုံတွေနဲ့သက်သေပြမယ်း) ။
သူက Jonathan Livingston Seagull လား ။ အခုလောလောဆယ် ဖတ်နေတယ့် စာအုပ်နာမည်ပါ။
World War II Memorial ။ အမေရိကန်တွေ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ပါဝင်လာပုံ ရုပ်ထုတွေ၊ ပြည်နယ်တခုချင်းစီအတွက် ကျောက်တိုင်တွေ၊ ရေပန်းတွေနဲ့အတော်သာယာတယ်။ ကယ်ပီတယ်လည်း ငါ မကြိုက်ဘူး၊ အိမ်ဖြူတော်လည်း ငါ မကြိုက်ဘူး၊ ဒီစီမှာ ငါ အကြိုက်ဆုံးက ဒီနေရာလို့ဆိုလာသူက ဆူနမ်။
ကိုရီးယား ကျောင်းသားလေးတွေ ကက်ဆက်ဖွင့်ပြီး စည်းချက်ညီညီ ကခုန်ကြတာကို လမ်းက ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေက လက်ခုပ်တီး အားပေး၊ ဓာတ်ပုံရိုက်။ ကိုယ်လည်း ဘယ်နေပါ့မလဲး) ။
မတ်ထရိုဘိုက်နဲ့ဒီစီလည်
ဒီစီရဲ့ဘူတာရုံ တော်တော်များများမှာ ဒီလို အနီရောင် Metro Bike တွေ ရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ရထားကို MRT ၊ ဟောင်ကောင်မှာ MTR ၊ ဒီစီမှာ Metro ၊ နယူးယောက်မှာ Subway လို့ခေါ်ပါတယ်။ မန်ဘာဝင်ထားရင် မတ်ထရို ဘူတာတွေ တခုကနေတခုကို လိုတယ့်အချိန် ဘူတာရုံမှာ ဒီအနီရောင်စက်ဘီး ကောက်စီး၊ အနီးအနားက ဘူတာတွေမှာ ထားခဲ့။ လေထုညစ်ညမ်းမှုလည်း မရှိတယ့် မတ်ထရိုစက်ဘီးက ဒီစီမှာ အတော့်ကို ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားမြို့ ကြီးတွေမှာလည်း ဒီစီမတ်ထရိုစက်ဘီးကို နမူနာယူပြီး လုပ်မယ်လို့ကြားတယ်။
March on Washington လူမည်းတွေ လူဖြူတွေနဲ့ တန်းတူ မဲပေးခွင့်ရအောင် စည်းရုံးလှုံ့ ဆော် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး မာတင်လူသာကင်းက သမိုင်းဝင် I haveadream မိန့် ခွန့် ကို လင်ကွန်းမန်မိုရီယန်မှာ ပြောကြားခဲ့တာ သြဂုတ် ၂၈ ဆို နှစ် ၅၀ ပြည့်ပြီ။ ချီတက်ပွဲရှိလို့ဒီစီတခွင် လူတွေစည်နေပါတယ်။ သမိုင်းတွင်တယ့် ချီတက်မူကို အစဉ်အလာမပျက် ထောင်ပေါင်းများစွာ ချီတက်ကြသလို၊ ချီတက်ပွဲမှာ ပြောကြားတယ့် မိန့် ခွန်းတွေကို တီဗွီတွေက မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးသလို Update News ကိုလည်း တင်ဆက်ပေးပါတယ်။ သမိုင်းကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ့် ဒီချီတက်ပွဲကို အမေရိကန်တွေ သိပ်ဂုဏ်ယူတယ်။
လူမည်းတွေ လူဖြူတွေနဲ့ တန်းတူ မဲပေးခွင့်ရအောင် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း သမိုင်းဝင် I haveadream မိန့် ခွန်း ပြောခဲ့တာ လူမည်းတွေ ကျွှန်ဘဝကနေ လွှတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ့် သမ္မတလင်ကွန်းရုပ်တုရှေ့ ပါ။ I haveadream လို့ကမ္ဗည်းထိုးထားတယ်။
ကို်ယ်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း လွန်ခဲ့တယ့် ၂၅ နှစ်တုန်းက ဒီလိုသမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တခု ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
March On Washington အတွက် ပြင်ဆင်နေကြတာ
I haveadream ကမ္ဗည်းနဲ့မိုးနူးမတ်
ဘူတာရုံမှာ ကမ်းတယ့် သတင်းစာမှာ I haveadream မိန့် ခွန်းကို ဖတ်လိုက်ရတုန်းက သမိုင်းဝင်မိန့် ခွန်းဆိုတာ ဒီလိုမျိုးခွန်အားရှိပါလား ။ မဖတ်ရသေးတယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို ဖတ်ရအောင် ဘလော့ကနေ ရှယ်လိုက်တာပါ။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အကြာ မာတင်လူသာကင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရတယ်။ လက်ရှိသမ္မတက ပထမဆုံး အာဖရိကန်နွယ်ဖွား အမေရိကန် သမ္မတ။ အဲဒီချီတက်ပွဲသာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် သမ္မတအိုဘာမားလည်း ရှိလာခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။
I haveadream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. "We hold these truths to be self evident: that all men are created equal." I haveadream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit down together atatable of brotherhood. I haveadream that one day even the state of Mississippi,adesert state, sweltering with the heat of injustice and oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. I haveadream that my four children will one day live inanation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I haveadream today.
အာရှတခွင်မှာတော့ မေဒေး အလုပ်သမားနေ့ က မေလ ၁ ရက်နေ့ဖြစ်ပေမယ့် အမေရိကန်မှာတော့ စက်တင်ဘာလရဲ့ပထမဆုံး တနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မေဒေးလို့မခေါ်ဘဲ လေဘာဒေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ လေဘာဒေးပိတ်ရက်မှာ ခရီးပဲ သွားဖြစ်မလား၊ တောင်ပဲ တက်ဖြစ်မလား မသိသေး။ ဒီစီကို လည်ပတ်ခဲ့ရင်တော့ All About DC အပိုင်းတွေ အနေနဲ့ဆက်ရေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။
သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၃။
လင်ကွန်းရုပ်တုကြီးမြင်တော့ night at the museum ထဲမှာ ထပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကို သတိသွားရလို့ ပြုံးမိသေးတယ်...ယောနသံဇင်ယော်ကို ဖတ်ပြီးရင် ခံစားချက်လေးတွေ တင်စမ်းပါဦး...တစ်ခါဖတ်ရင် တစ်မျိုးခံစားနေရသလိုပဲမို့...